Otu esi ebudata PES 16 Apk n'efu Maka gam akporo  - Luso Gamer
April 13, 2022 January 22, 2022 by Shweta Rout
PES 16 Apk bụ otu n'ime egwuregwu Esport kachasị dị egwu oge niile. Pro Evolution Soccer 2016 na-enye usoro egwuregwu bọọlụ kacha mma maka ndị egwuregwu ị ga-enwe ọ .ụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ a n'elu ikpo okwu na-ezi uche-egwu egwuregwu, mgbe ahụ i nwere na-egwu a dị ịtụnanya egwuregwu.
E nwere ụdị egwuregwu dị iche iche, nke ndị mmadụ na-ahọrọ igwu egwu. Ma Egwuregwu bọọlụ bụ egwuregwu kacha ewu ewu n'ụwa, nke nwere ọtụtụ ijeri ndị na-akwado ya n'ụwa niile. Ndị mmadụ na-enwe mmasị ikiri otu egwuregwu kachasị amasị ha ka ha na-egwu wee merie. Yabụ, anyị nọ ebe a na ikpo okwu a, nke ị nwere ike ịbụ akụkụ nke ya.
Kedu ihe bụ PES 16 Apk?
PES 16 Apk bụ ngwa ngwanrọ gam akporo, nke na-enye ezigbo usoro ikpo okwu maka ndị egwuregwu bọọlụ. Soro ndi otu gi kacha egwu egwu ma malite imeri ihe di iche iche. Nwere ike ịkọ ndị otu gị n'otu ntabi anya ma kpọọ egwuregwu kachasị ike.
Pro Evolution Soccer bụ usoro, nke na-enye usoro ntanetị kachasị egwu maka ndị fan iji nwee ọ footballụ na football. Site na usoro ohuru ọ bụla, etolitela ya nke ọma ma na-enyekwa ikpo okwu kachasị mma. N'ime ụdị ịtụnanya a, emeela ọtụtụ mmelite, nke anyị ga-eso gị.
Dị iche iche ọkachamara Player e banyere dị ka mkpuchi nke egwuregwu. Yabụ, ị ga - enweta Neymar Jr na mkpuchi nke PES 2016 Apk. Ọ na-enye ezigbo agbamume maka Neymar Jr Fans, na-anya isi na dike ha.
A na-ebute ụfọdụ ụdị ọhụrụ maka ndị egwuregwu ka ha nwee ihe dị iche. Ọ bụrụ na ị na-enwe nkụda mmụọ na igwu egwu megide bots, mgbe ahụ ọ na-enye egwuregwu n'ịntanetị. Yabụ, ị nwere ike ịchọta ndị mmegide ntanetị, gị na ha nwere ike igwu egwu ma nwee ọ .ụ.
Ọnọdụ MyClub na-enye ndị egwuregwu ohere iji wuo otu nrọ ha, na-eji kaadị azụmaahịa gị niile. Yabụ, ịnwere ike ịnwe ndị egwuregwu kachasị amasị gị ma bido soro ndị enyi gị gwuo egwu. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe onye ofufe, ị ga-anwale ya.
Na mbipute gara aga, eserese ahụ dị mma, mana ewebatala eserese kachasị adaba na PES 2016 Mobile maka ndị ọrụ. Nwere ike ịchọta eserese dị elu, nke ị ga-esi nwee echiche doro anya banyere ndị egwuregwu niile.
Njirimara nwayọ nwayọ bụ otu n’ime njirimara kachasị mma nke egwuregwu ahụ. Ndị na-egwu egwu na-enwekarị igwu egwuregwu ahụ kpọmkwem, mana ebe a ị nwere ike ịnwe ahụmịhe kachasị mma. Nwere ike ịnwe nwayọ nwayọ, yana akara ọ bụla, ma ọ bụ mmegharị pụrụ iche na ya.
Enweghi ebe egwuregwu dị na ụdị gam akporo maka ndị ọrụ. Ikike nke ámá egwuregwu bụ nnukwu okwu maka ndị mmepe, nke a bụ otu n’ime isi ihe kpatara eji eme egwuregwu ndị ahụ. Ma ị nwere ike ịnweta ọtụtụ ámá egwuregwu ebe a.
Maara na PES 15 ụfọdụ egwuregwu na-efu na egwuregwu ahụ, n'ihi nsogbu ikike. Mana na nke a, edozila nsogbu niile ikike, ma mara na ị nwere ike ịnakọta nchịkọta niile nke ọgbakọ na iko ebe a. Offọdụ n'ime ihe omume dị n'okpuru maka gị.
Ndị mmeri AFC
Iko South America
Ndị otu na ndị egwuregwu
Imirikiti ndị egwuregwu na-efu na 15, mana ebe a ị nwere ha niile yana ọbụlagodi ụfọdụ ndị egwuregwu ọhụụ. E tinyela ìgwè ọhụrụ 8 na ya maka ndị egwuregwu. Nwere ike ịnweta ndị egwuregwu ọhụụ 51 ọzọ, nke pụtara na a ga-enwe nhọrọ ndị ọzọ.
Enwere atụmatụ ndị ọzọ dị ịtụnanya nke etolitere na PES 16 Apk OBB., Mana ị ga-enyocha ha niile. Peoplefọdụ ndị mmadụ chọkwara ịma egwuregwu egwuregwu nke egwuregwu ahụ, nke dị mfe ma dịkwa mfe. Ya mere, anyị na-aga ịkọrọ gị ya n'okpuru.
Etu esi egwu PES 16 Egwuregwu na gam akporo?
Ọ bụrụ n ’ịbụ onye ọhụụ maka ikpo okwu ịgba egwu egwuregwu a, echegbula onwe anyị na anyị ga-akọrọ gị gbasara gị ihe niile. Ozugbo usoro ndebanye aha niile mechara, ị ga-ebido egwuregwu na ngwaọrụ gị. Ọ ga-enye gị ọtụtụ nhọrọ, nke ị nwere ike inyocha.
Mana anyị ga-ekerịta ụfọdụ isi ihe eji egwu egwu. Ihe mbu bu ichota onye njikwa agwa gi. Enwere ọtụtụ njikwa dị, nke ị nwere ike ịhọrọ. N'otu oge, ịmechara usoro nhọrọ agwa gị, oge eruola iwulite otu gị.
Enwere otutu uzo iji nweta otu na PES 2016 Apk. Nwere ike ịmalite site na ndị otu arụnyere dị, ị nwere ike isonyere ndị otu ọ bụla dị ka njikwa ha, ma ọ bụ ị nwere ike iwulite otu gị. Iji mee ka usoro a dị mfe, sonyere ndị otu dịnụ.
A ga-enwe ihe omume dị iche iche maka gị, nke ị nwere ike igwu egwu. Mana ị ga-ebu ụzọ nwee egwuregwu enyi iji nwalee ikike gị. Ọ bụrụ n’iche, ịnwere ike were ndị otu ọzọ n’ụzọ dị mfe, wee malite igwu egwu n’ihe omume ma merie ha.
Na mmeri ọ bụla, ọkwa gị ga-abawanye ma nweta ọtụtụ isi. Yabụ, ịnwere ike ịkwalite ndị egwuregwu gị, ngwa iwu na atụmatụ ndị ọzọ. E nwere atụmatụ ndị ọzọ na ya, nke ị nwere ike inyocha iji oge. Yabụ, PES 16 Budata ma bido igwu egwu.
I nwekwara ike Gbalịa Pro Evolution Soccer 2012
Etu esi ebudata PES 2016 Mobile?
Egwuregwu faịlụ ahụ buru ibu, ọ bụ ya mere anyị ji nwee OBB na Apk. Yabụ, ị ga-ebudata PES 16 Apk Obb na ibe a. Anyị na-aga ịkekọrịta bọtịnụ nbudata na elu na ala nke ibe ahụ. Enweta na ya na-eche a sekọnd ole na ole, nbudata ga-amalite na-akpaghị aka.
Nseta ihuenyo nke Egwuregwu
Isi atụmatụ nke ngwa
Kacha mma na Realistic Platgba Cha Cha Platform
100+ Ndị Ọkachamara Ndị Ọkachamara
Oge egwuregwu, Njikọ, na iko
Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ihe nkiri
Ezigbo na Njikwa ngwa ngwa na-anabata
Egwuregwu Egwuregwu Online na Na-anọghị n'ịntanetị
PES 16 Apk ga-emezu nrọ nke ọtụtụ ndị na-agba bọlbụ ka ha bụrụ naanị akụkụ nke ọkacha mmasị ha kama ọ bụ onye njikwa otu ahụ. Ya mere, mezuo ochicho gi na ngwa a di itunanya ma nwee obi uto na oge gi.
Categories Egwuregwu, Egwuregwu Tags Egwuregwu bọọlụ, PES 16 gam akporo, PES 16 ngwa, PES 16 Ngwa OBB, PES 16 Egwuregwu, Pes2016 Ekwentị Mail igodo
Otu esi ebudata PES 13 Apk maka gam akporo? 